Nagu saabsan - Xiamen Frand Qalabka Sirdoonka Sirdoonka Co., Ltd.
Waxaan nahay khabiir qalabka warshadaha si toos ah kaas oo socda laba warshad ka badan 10 sano. In ka badan 60 shati farsamo.
XIAMEN FRAND CILMI CAQLI AH CO., LTD oo ku yaal Dabaqa Saddexaad, No.130 Dhismaha Jiapin Indutrial Park, Guan Kou Zhong Road, Degmada Jimei, Xiamen Fujian, Shiinaha.Waxay ku hawlanayd warshadaha muddo 15 sano ah. Waa shirkad casri ah oo cilmiyaysan iyo tikniyoolajiyad ku takhasustay cilmi baarista habeysan iyo horumarinta noocyo dhammaystiran oo caqli badan oo qalab ah, qalab warshad isku dhafan iyo adeegsiga nidaamyada aaladaha robotka. Waqtigaan la joogo, waxay leedahay afar saldhig oo wax soo saar R&D ah iyo in ka badan 60 shati.Shirkaddayadu waxay inta badan dabooshaa shan qaybood oo waaweyn oo tamar cusub ah, qaybo gawaarida ah, elektaroonig sax ah, qalabka warshadaha iyo qufulka, iyo nidaamka warshadaha caqliga badan. Qalabka waxaa loo dhoofiyay Jarmalka, Mareykanka, Japan, Thailand, Hindiya, iwm.
FARSAMADDA FALANKA FARANNAAN waxay ku takhasustay cilmi baarista habeysan iyo horumarinta qalab dhameystiran oo caqli badan, otomaatiga warshad isku dhafan iyo adeegsiga nidaamyada robot warshadaha. Waxay leedahay afar saldhig oo cilmi baaris iyo wax soo saar horumarineed ah iyo in ka badan 60 shatiyeed. Ku takhasusay naqshadeynta / sameynta baaritaanka saxda ah & qalabka isugeynta - adoo adeegsanaya xakameynta dhaqdhaqaaqa caqliga, aragtida & aaladaha. Waxaan nahay mid ka mid ah bixiyaha sare ee qalabka otomaatiga iyo xalalka nidaamka otomatiga ee Shiinaha. Qaybaha qalabka: 1.Hose mashiinka otomaatiga isku haynta 2.Mashiinka isku-dhafka Buzzer 3. Isku-xirka carbureter iyo mashiinka tijaabada.
4. Qufulka mashiinka isku xidhka qufulka 5. Isku xidhka gudbinta iyo mashiinka tijaabada Qaybaha mashiinka iskudhafka: Qaybta shirarka otomaatiga ah waxaa ka mid ah: carburetor / relay / socket qayb / laambad LED / buzzer / piezoelectric Buzzer / xiriiriyaha rivet / qalabka warshadaha / biiyaha mashiinka / magnetic latching relay / inductance / Cadaadiska qayb ahaan / qufulka albaabka / furaha bilowga Qalabka la xiriira: dareeraha dareeraha fiber optic / mashiinka wax lagu shubo ee mashiinka / saxarada quudiyaha / caaryada warshadaha / mashiinka furitaanka gawaarida.
Mashiinka haysa tuubada, Mashiinka qaadashada maaskaro aan tolmo wanaagsan lahayn, aan tolmo wanaagsan lahayn mashiinka qaadashada maaskaro, mashiinka sameeyaha maaskaro, mashiinka sameynta maaskaro qalliin, mashiinka sameynta maaskaro wajiga qalliinka,